डेटामा आक्रामक बन्दै टेलिकम, ४ सयमै महिनाभर इन्टरनेट चलाउन पाइने ! - Dhangadhi Khabar
सोमबार ०९, जेठ २०७९ २०:४९
डेटामा आक्रामक बन्दै टेलिकम, ४ सयमै महिनाभर इन्टरनेट चलाउन पाइने !
निकै मितव्ययी भएर मोबाइल इन्टरनेट चलाउनुपर्ने परिस्थिति परिवर्तन गर्ने गरी नेपाल टेलिकमले तयारी थालेको छ । छोटो समय अवधिका लिमिटेड डेटा प्याक बिक्री गर्ने चल्तीको बजारलाई पछि पार्दै टेलिकमले नयाँ अनलिमिटेड डेटा प्याकहरू ल्याउने योजना बनाएको हो ।
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीका अनुसार महिनाभर नै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी अनलिमिटेड डेटा प्याक ल्याउने कम्पनीको योजना छ । निर्धक्कले इन्टरनेट चलाउन फ्री वाइफाई खोज्नुपर्ने परिस्थिति अब हुने छैन, कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले भन्नुभयो, “अब छिटरटै सस्तो र महिनाभर नै अनलिमिटेड प्रयोग गर्न सकिने डेटा प्याक ल्याउँदै छौँ ।” उहाँका अनुसार करिब चार सय रुपियाँमै त्यस्तो डेटा प्याक उपलब्ध गराउने गरी व्यावसायिक योजना बनिरहेको छ ।
छोटो समय अवधिका लिमिटेड डेटा प्याक बिक्री गर्ने चल्तीको बजारलाई पछि पार्दै टेलिकमले नयाँ अनलिमिटेड डेटा प्याक ल्याउने योजनामा आक्रमक भएर लागिपरेको हो । खासगरी भ्वाइस कल र अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा भारी गिरावट हुन थालेपछि टेलिकम पछिल्लो समय सस्तो र लामो अवधिको डेटा प्याकमा केन्द्रित भइरहेको छ ।
अर्कोतिर डेटा प्रयोग बढे पनि त्यसलाई आम्दानीमा रूपान्तरण गर्न मुस्किल भइरहेको परिस्थितिमा अनलिमिटेड डेटा प्याकलाई टेलिकमले नयाँ आम्दानीको आधारका रूपमा हेरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।
टेलिकमको तथ्याङरकअनुसार अहिले डेटा प्रयोग गर्नेमध्ये ९० प्रतिशतले प्याक लिएरै चलाउँछन ।
बाँकी १० प्रतिशतले मात्र ‘पे एज यु यो’ अर्थातर प्याक नलिई सामान्य रूपमै इन्टरनेट प्रयोग गर्छनर । डेटा प्याकको बढरदो प्रयोगलाई कम्पनीको आम्दानी बढाउने माध्यमका रूपमा टेलिकमले नयाँ डेटा प्याक घोषणा गर्नलागेको हो ।
बुधबार २३, भदौ २०७८ ०१:३६ मा प्रकाशित